ထိုင်ပေမြို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်သီးသန့်ကဏ္ဍမြန်မာဘာသာ-ပြင်းထန်သောအထူးကူးစက်ကပ်ရောဂါအဆုတ်ရောင် (COVID-19 အတိုကောက်ဝူဟန့် အဆုတ်ရောင်) ဇုန်- နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီနိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့်လူများစီးဆင်းမှုအပေါ်တုံ့ပြန် သည့်အနေဖြင့်နွေဦးပွဲတော်အတွက်သီးခြားကွာရန်တင်းအစီအစဉ်3ခုကိုကွပ်ကဲမှုစင်တာမှရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ (C/12-5)
နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီနိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့်လူများစီးဆင်းမှုအပေါ်တုံ့ပြန် သည့်အနေဖြင့်နွေဦးပွဲတော်အတွက်သီးခြားကွာရန်တင်းအစီအစဉ်3ခုကိုကွပ်ကဲမှုစင်တာမှရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ (C/12-5)
ပြည်တော်ပြန်မွေးရပ်မြေသို့ပြန်လာသူများအတွက်ကွာရန်တင်းနေရာများတောင်းဆိုမှုကြီး မားသည့်အတွက်2021ခုနှစ်12လ14ရက်မှ2022ခုနှစ်2လ14ရက်ကြားကာလ၊「ဗဟို ချုပ်ကိုင်မှုကင်းစင်ရေးဌာန(သို့)ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဟိုတယ်တွင်ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့် ကွာရန်တင်း7ရက်+အိမ်တွင်ကွာရန်တင်း7ရက်+ကိုယ်ပိုင်သီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု 7ရက်」ရွေးချယ်ခွင့်များကိုထည့်သွင်းသွားပါမည်၊အဆိုပါကွာရန်တင်းအစီအမံများကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။：
ယေဘူယျအခြေခံမူ：ဝင်လာသောခရီးသည်များအတွက်ကွာရန်တင်းကာလသည်14ရက် ဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်သည့်အချိန်နှင့်ကွာရန်တင်းကာလမကုန်ဆုံးမီ1ရက်အလိုတွင်PCRစမ်း သပ်မှုစစ်ဆေးရပါမည်။ကွာရန်တင်းကာလကုန်ဆုံးပြီးနောက်သီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဖြင့်7ရက်ဆက်လက်လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်၊နေအိမ်(သို့)ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၏နေအိမ်တွင်သီးခြားနေထိုင်ခြင်းအခြေအနေရွေးချယ်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်；ထို့အပြင် နိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသောမိသားစုဝင်များ/အတူနေသူများကွာရန်တင်းကာလတွင်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဟိုတယ်(သို့)ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသောကွာရန်တင်းနေရာတွင်အတူနေထိုင်နိုင်သည်၊အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတစ်ခန်းတည်းအတူနေနိုင်သည်။
1.အစီအစဉ် A：ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဟိုတယ်တွင်ကွာရန်တင်းကာလ14ရက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်သီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို7ရက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။
2. အစီအစဉ် B：「ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဟိုတယ်တွင်10ရက် +အိမ်တွင်ကွာရန်တင်း 4ရက် +ကိုယ်ပိုင်သီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု7ရက်」：
(1)ဝင်ရောက်သူများ：ပထမ10ရက်(ဝင်ရောက်သည့်0-10ရက်)တွင်ကပ်ရောဂါကာကွယ် ရေးဟိုတယ်တွင်နေထိုင်ပြီးကွာရန်တင်း၏9-10ရက်နေ့တွင်PCRစစ်ဆေးမှု1ကြိမ်ထပ်တိုးသည်၊စစ်ဆေးမှုရလဒ်သည်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်ပြီးနောက်11ရက်မြောက်နေ့တွင်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးနောက်4ရက်ဆက်၍(ဝင်ရောက်ပြီးနောက်11-14ရက်)အိမ်တွင်ကွာရန်တင်း နေပြီးကွာရန်တင်းကာလမကုန်ဆုံးမီ1ရက်အလိုတွင်PCRစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်၊ စစ်ဆေးမှုရလဒ်သည်အနှုတ်ဖြစ်နေသူကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကွာရန်တင်းစနစ်အားရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီးသီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို7ရက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
(2)အိမ်တွင်ကွာရန်တင်းသည်လူ1ဦး1အိမ်နိယာမအပေါ်အခြေခံထားသည်၊ဆိုလိုသည် မှာအိမ်တွင်အိမ်တွင်းကွာရန်တင်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသူများနေနိုင်သည်။သို့သော်လည်းအတူနေထိုင်သောမိသားစုဝင်များ(အိမ်ကွာရန်တင်းမဟုတ်သူ) ကာကွယ်ဆေး2ကြိမ်ထိုးပြီးသူ သည်တစ်အိမ်တည်းတွင်1ဦး1ခန်းဖြင့်အတူနေနိုင်သည်။
3. အစီအစဉ် C：「ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းစင်ရေးဌာန(သို့)ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဟိုတယ် တွင်ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်7ရက်နေရမည်+အိမ်တွင်ကွာရန်တင်း7ရက်+ကိုယ်ပိုင်သီးခြား ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု7ရက်」ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ အရေးပေါ်အသုံးပြုမှုစာရင်း (WHO EUL) (သို့) အသုံးပြုရန်(သို့) ပရောဂျက်ထုတ်လုပ်ရန် အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ခွင့်ပြုထားသောအရေးပေါ်ခွင့်ပြုချက်ရှိရမည်：
(1)ဝင်ရောက်သူ：ဝင်ရောက်စဉ်COVID-19ကာကွယ်ဆေး2ကြိမ်ထိုးပြီး14ရက်ပြည့်ပြီး၊ ပထမ7ရက်(ဝင်ရောက်သည့်0-7ရက်)ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းစင်ရေးဌာန(သို့)ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးဟိုတယ်တွင်ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်နေရမည်၊ကွာရန်တင်းဌာန/ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးဟိုတယ်ကွာရန်တင်းကာလမကုန်ဆုံးမီ1ရက်အလိုတွင်PCRစမ်းသပ်မှု 1ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ၊စစ်ဆေးမှုရလဒ်သည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါကနောက်နေ့တွင်အိမ်ပြန်၍ 8-14ရက်ဆက်လက်အိမ်တွင်ကွာရန်တင်းကိုအပြီးသတ်နိုင်သည်၊10ရက်မြောက်နေ့တွင်ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်အိမ်တွင်အမြန်စစ်ဆေးခြင်း1ကြိမ်ထပ်တိုး၍ကွာရန်တင်းကာလမကုန် ဆုံးမီတစ်ရက်အလိုတွင်PCRစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပါ၊စမ်းသပ်မှုရလဒ်သည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါကသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကွာရန်တင်းစနစ်အားရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီးသီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို7ရက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
(2)အိမ်တွင်7ရက်ကြာကွာရန်တင်းသည်လူ1ဦး1အိမ်နိယာမအပေါ်အခြေခံထားသည်၊ဆိုလိုသည်မှာအိမ်တွင်အိမ်တွင်းကွာရန်တင်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသူများနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။သို့ရာတွင်လူ1ဦး1ခန်းရွေးချယ်မည်ဆိုပါက၊အတူနေထိုင်သောမိသားစုဝင်များ(အိမ်ကွာရန်တင်း မဟုတ်သူ) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။：
(b.) အတူနေထိုင်သောမိသားစုဝင်များ(အိမ်ကွာရန်တင်းမဟုတ်သူ)သည်အိမ်တွင်ကွာရန် တင်း၏8-14ရက်မြောက်နေ့တွင်「ကိုယ်ပိုင်သီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းစေ ခြင်း」 ကိုဆောင်ရွက်ပါ၊5-21ရက်များတွင်「ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု」ကိုဒေသန္တရအစိုးရမှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
(c.) အတူနေထိုင်သောမိသားစုဝင်များ(အိမ်ကွာရန်တင်းမဟုတ်သူ)သည်အိမ်တွင်ကွာရန် တင်း၏10ရက်၊14ရက်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်အိမ်တွင်အမြန်စစ်ဆေးမှု1ကြိမ်စစ်ဆေးရမည်။
1.ကွာရန်တင်းစင်တာ၏ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်စက်ပစ္စည်းများကိုကန့်သတ်ထားပြီး၊လူ1ဦး1ခန်းအသုံး ပြုပါသည်၊အသက်12အောက်ကလေးများ(သို့)စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သူများရှိပါကကျေးဇူး ပြု၍ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဟိုတယ်ကိုပြောင်းပါ။
2. 2021ခုနှစ်11လ19ရက်တွင်မွမ်းမံခြင်း：အစီအစဉ် C「ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းစင်ရေးဌာန(သို့) ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဟိုတယ်တွင်ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်7ရက်နေရမည်+အိမ်တွင်းကွာရန်တင်း7ရက်+ကိုယ်ပိုင်သီးခြားကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု7ရက်」ပါဝင်သူများ၊အိမ်တွင်ကွာရန် တင်းကာလတွင်အမြန်စစ်ဆေးခြင်း(10ရက်မြောက်နေ့)၊ပြည်သူလူထုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ပြင်ဆင်လိုက်သည့်အိမ်တွင်အမြန်စစ်ဆေးမှု1ကြိမ်စစ်ဆေးရမည်။
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2021-12-21 12:29